IGaldakao Comic Contest inombolo 19 | Izincwadi Zamanje
Inombolo yomncintiswano wamaGaldakao Comic 19
Kusuka Izithelo zesipina izindaba ezilandelayo zifika kithi:
Umkhandlu Wedolobha laseGaldakao uhlela umncintiswano we-XIX Galdakao Comic, onezisekelo ezilandelayo:
Abantu abaneminyaka ephakathi kwengu-14 nengu-17 esigabeni sokuqala, futhi kusukela eminyakeni engu-18 kwesesibili, bangabamba iqhaza emncintiswaneni, bakwazi ukukwenza ngabodwana noma umbhali wesikrini nombonisi ngokuhlanganyela.
ISIHLOKO, UKULINGANISELA NOKWENZA IFOMU
Kusungulwe izindlela ezimbili: umugqa wamahlaya nowamahlaya.
Isihloko sizokhululeka, kepha lokho kusebenza ngokuqukethwe okunodlame, ubulili, ubuhlanga noma okukhuthaza ukungabekezeleli kunoma yimuphi umkhakha ngeke kwamukelwe.
Abalingiswa kumele babe ngabokuqala bendalo yabo futhi bangashicilelwa, umsebenzi unganikwanga komunye umncintiswano.
Imisebenzi izokwenziwa ngombala noma mnyama nomhlophe, kwethulwe umsebenzi wokuqala emncintiswaneni.
Imisebenzi izoba namakhasi angafika kwangu-4 ngosayizi we-DIN A4 obhalwe ngokufanele ngesiBasque noma ngeSpanish.
Imisebenzi izokwethulwa ngosayizi we-19x8cm, noma isilinganiso esilinganisiwe, ihlukaniswe ngama-vignette amabili noma ngaphezulu futhi abhalwe ngokufanele ngesiBasque noma eSpain.
Imisebenzi kungenzeka ukuthi ayinalo igama lombhali ngendlela ebonakalayo futhi izokwethulwa ngemvilophu, ngaphandle kwesiginesha noma igama, ngaphandle kwayo kuzovela isihloko noma isiqubulo, futhi kukhombisa isigaba esinikezwe sona. Ngaphakathi kuzophelezelwa enye imvilophu enesihloko esifanayo noma isiqubulo kanye nesigaba futhi ezoqukethe inothi elinemininingwane yomuntu yombhali noma umbhali: igama, ikheli, inombolo yocingo kanye neminyaka, kanye nekhophi ye-DNI
INDAWO NEZINSUKU ZOKWENZISWA
Imisebenzi le ingahle yethulwe eMitapweni Yezincwadi kaMasipala yase-Usansolo naseTorrezabal Kultur Etxea, e-Culture Area yoMkhandlu Wedolobha laseGaldakao, noma ngeposi kuleli kheli elilandelayo:
UTorrezabal Kultur Etxea
UMncintiswano we-XIX GALDAKAO COMIC
Isikhathi esinqunyiwe sokulethwa kwemisebenzi siphela ngoJuni 13, 2008.
Ijaji elifanelekayo yilona elizonquma ngemisebenzi engcono kakhulu.
Ijaji lingase limemezele ukuthi le miklomelo ayisebenzi, izinqumo zayo zingafinyeleleki kuzo zonke izinhloso, futhi zinikwe amandla okuxazulula zonke izehlakalo ezinganikezwanga kule Kholi.
Isinqumo somncintiswano sizokwenziwa ngaphambi kukaJuni 27.
UMkhandlu Wedolobha unelungelo lokushicilela imisebenzi.
Ngokufanayo, umbukiso wawo wonke noma ingxenye yomsebenzi owenziwayo kungenzeka.
Lapho umbukiso usuphelile, kusukela ngo-Okthoba 1, labo abangaphumelelanga bazokwazi ukuhoxisa imisebenzi yabo noma bacele ukubuyiselwa kwabo ngeposi.
Isigaba (iminyaka engu-14 kuya kwengu-17 ubudala)
- 1. Umklomelo :: € 250
- Ukufinyelela emsebenzini omuhle eBasque: € 125
- Accesit 1. Classif. kusuka eGaldakao: € 100
Isigaba (iminyaka engu-18 nangaphezulu)
- Umklomelo wokuqala: € 1
- Ukufinyelela emsebenzini omuhle eBasque: € 400
- Accesit 1. Classif. kusuka eGaldakao: € 250
- 1. Umklomelo: € 250
Le miklomelo izokwehliselwa i-18% yentela yomuntu siqu engenayo
Abawinile bemiklomelo yokuqala esigabeni ngasinye ngeke bakwazi ukufinyelela eminye yemiklomelo yesibili.
Ukubamba iqhaza kulo mncintiswano kusho ukwamukelwa kwayo yonke imibandela yayo.
Kuzo zonke izinto ezinganikezelwanga ngokucacile kulolu cingo, i-Odinensi Yokulawula Ukunikezwa Kwezibonelelo Zomkhandlu Wedolobha laseGaldakao izosebenza, ngokuya ngokuhambisana nohlobo olukhethekile lwalezi zibonelelo.
Ngeminye imininingwane mayelana nomncintiswano, abantu abanentshisekelo bangaxhumana nale nombolo yocingo elandelayo: 94 4010572
Qaphela: ukuze uthobele izinhlinzeko ze-Organic Law 15/99 kaDisemba 13, ku-Protection of Personal Data, ababambiqhaza bayaziswa ukuthi imininingwane yabo izofakwa efayeleni ukuze kuthunyelwe imininingwane ngemisebenzi ehlukene ehlelwe yi UMnyango Wezamasiko woMkhandlu Wedolobha laseGaldakao. Umuntu obhekene naleli fayela nguMkhandlu Wedolobha laseGaldakao, lapho bengasebenzisa khona amalungelo abo okuthola, ukulungisa, ukukhansela nokuphikisa ngokulicela ngokubhala kwiRegistry yoMkhandlu Wedolobha laseGaldakao.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Inombolo yomncintiswano wamaGaldakao Comic 19
Uhlelo lwesi-2 lomklomelo we-International Graphic Novel Award